FAQ - Qingdao Renergy Izinsiza kusebenza Co., Ltd
ingabe a ophephela komoya ukwenza kanjani ugesi?
Umoya iphendula izindwani round; lokhu osebenzisa shaft, okuyinto uxhuma generator. A generator ukhiqiza energy kagesi belokhu lokukhanda.
Yini Usayizi umoya ephendulwa engiludingayo?
Lokhu kuncike amandla funa. Sicela ukubala max ukusetshenziswa yakho kagesi ngosuku. Ngokwesilinganiso, enomgwalo American kuzodinga ophephela encane nge 5kw noma 10kw ophephela.
Uyini isilinganiso payback isikhathi?
Ubude isikhathi payback incike ophephela, ikhwalithi komoya endaweni ukufakwa, linqoba amazinga kagesi, kanye izimali etholakalayo nemihlomulo. Kuye lezi kanye nezinye izici, isikhathi kuthatha ukuba alulame ngokugcwele izindleko umoya ephendulwa encane kungathatha kuphi engu-6 kuya 30.
kuthiwa izinhlelo ezincane emoyeni zigcinwe kanjani?
ukuhlolwa Asebenza lwenziwa kanye njalo eminyakeni embalwa a ophephela sika-20 + engu sempilo. A isifaki professional noma uchwepheshe oqeqeshiwe (ngokuvamile ngabakhiqizi noma umthengisi ukuthi ithengiswe samanzi) igcina samanzi nombhoshongo ngokusebenzisa ukuhlolwa ngokomzimba, noma ezinye izinjini ezisebenza ingaqashelwa ukude kusuka kukhompyutha ekhaya.
Ingabe isidingo uhlela imvume?
Small Wind Energy ukufaka kungadinga imvume yokuhlela futhi kufanele ngaso sonke isikhathi uxhumane emiswe iziphathimandla zendawo. Sekukonke, izinqubomgomo zokuhlela kazwelonke ukusekela ukuthuthukiswa abancane Wind Energy.
Ingabe ophephela abaphehla ugesi ezinomsindo?
Small yethu Ophephela siklanyelwe thula kakhulu, ngokwesibonelo ngokuba oqondile drive izinhlelo ukugwema igiya ibhokisi umsindo futhi ukwandisa ukusebenza kahle. Ngokuvamile, umoya lenza umsindo ngaphezu ophephela komoya. Ngokungaphezulu, cishe kungenzeki ukuthi yimuphi umsindo kusukela Small Ophephela izawulalelwa emihlanganweni efanayo engaphezu kwengu-30 m. Umsindo osensimini azungeze 40-50 dB (A).
izisekelo 7.What nenomusa ingenza olihlinzekayo on-site yokufaka?
Ngaphambi kokufaka, sizobe ukuhlinzeka zonke mathupha lobuchwepheshe. Phakathi naleso sikhathi, sizothumela uchwepheshe ukuthi abe yihlo kulowo ukufakwa.
8.How engingayenza ukhethe uhlelo ocabangelayo?
Uma iphrojekthi yakho ikude kugridi yokuxhumana yomphakathi, bese ungase ucabangele off igridi uhlelo.
Uma nje Sethemba ukuze sinciphise amazinga kagesi ke ungase ucabangele ku Igridi uhlelo.
Ngaphandle kwabo, sikwazi ukukunikeza micro igridi / Telecom esiteshini bayalulandela solar hybrid system ngokuvumelana nezimo ezahlukene.
9.Maybe Angikwazi nje uyowuthenga izingxenye efana blade, inverter, futhi umbhoshongo?
Yebo, ungakwazi. Noma iyiphi iphrojekthi ahlobene, ukwamukela isabelo nathi.
Ngaphandle ekukhiqizeni, yini enye ongayenza?
Singakwazi obhekene design, ukuhlaziya, ukubala, yokumiswa.